मेयर र उपमेयरको सेवा सुविधा कति ? – Tourism News Portal of Nepal
मेयर र उपमेयरको सेवा सुविधा कति ?
१८ चैत, काठमाडाैं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा दावेदारी बढिरहेको छ । यसमा पनि महानगर, उपमहानगर र नगरगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा धेरैको चासो छ ।
धेरैको चासो बोकेको यो पदमा निर्वाचित व्यक्तिले सेवा सुविधा चाँहि के कस्तो पाउँछन् त ?संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था प्रेदेश कानून बमोजित हुने उल्लेख छ । तर, अहिले प्रदेश छैन । प्रदेश सभा गठन नभएसम्म प्रदेशसभाले बनाउने ऐन कानुन बनाउने अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसदलाई छ ।
तर, संसदमा अहिलेसम्म यसबारे कुनै विधेयक पेश भएको छैन । अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले मेयर र उपमेयर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको सेवा सुविधा तोक्ने आधारहरुको अध्ययन गर्दैछ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कुनै गाउँपालिका स्रोत साधन सम्पन्न छन् र कामको लोड पनि छ । कतिपयमा स्रोत साधन र काम दुबै कम छ । यस्ता आधारमा उनीहरुको सेवा सुविधा तोक्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको कार्यबोझ धेरै हुन्छ र सुविधा पनि त्यही अनुसार हुन्छ ।